फेसबुकमा भाइरसले अटो म्यासेज पठायो ! कसरी जोगिने ? – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी इन्फो / फेसबुकमा भाइरसले अटो म्यासेज पठायो ! कसरी जोगिने ?
ICT Khabar/आइसिटी खबर July 27, 2018	आइसिटी इन्फो, आइसिटी रिपोर्ट, साइवर क्राइम Leaveacomment 901 Views
फेसबुक म्यासेन्जरमा तपाइको नामबाट ‘भाइरस’ले तपाईलाई थाहै नदिइ अरू साथीलाई म्यासेज वा लिंक पठाउँछ हो ? पठाउँदैन भनेपनि तल दिइएका झै गरि आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा रहेका अनावश्यक एपहरु हटाउनुभयो भने तपाइको एकाउन्ट सुरक्षित रहन्छ ।
तपाईलाई सबैभन्दा धेरै मिस गर्न १० साथी, तपाईको अनुहार कुन कलाकारसँग मिल्छ? २० वर्षपछी तपाइको अनुहार कस्तो देखिन्छ ? यस्ता कुरा फेसबुकमा हेर्दै आउनु भएको होला ।
यि फेसबुकले आफै विकास गरेका सुविधा हैनन् । ‘थर्ड पार्टी एप’ भनिने यस्ता सुविधा फेसबुक कम्पनी र यसका डेभलपरले नभई अरूले नै विकास गरेका एप्लिकेशनलाई निश्चित सर्तमा सेवा सञ्चालन गर्न दिइएको हुन्छ ।
यि थर्ड पार्टी एप्प तपाईले प्रयोग गर्दा यिनले तपाईको साथीहरूको सूचि, इमेल ठेगाना र अरू विवरण प्रयोग गर्ने अनुमति माग्छन् । एकपटक अनुमति दिएपछी यस्ता एप्सले तपाई आफैले पठाए झैँ तपाईका साथीलाई म्यासेज पठाउँने वा तपाईको वालमा पोष्ट गर्ने अनुमति पाउँछन् ।
धेरैजसो थर्ड पार्टी एप नराम्रो नियतले बनेका भने हुँदैनन् । तरपनि कहिलेकाँही बदमासी गर्न सक्छन् । कतिपय यस्ता एपमा अरुकै आक्रमण भएर भाइसर वा अरू गलत नियतका एप छिर्न सक्छन् । यस्ता आक्रमणबाट सामान्य देखि तपाईको कम्प्युटर वा मोबाइल हिनामिना गर्ने भाइरस सम्म हुन सक्छन् । तपाईको फेसबुक, इमेल वा बैंकिङ कारोबारको पासवर्ड चोर्ने नियतले पनि यस्ता भाइरस छिर्छन् ।
साथीबाट आएका संकास्पद लिंक क्लिक नगर्नुहोस् । गरीहाले पनि उसले मागेको विवरण वा फेसबुकमा छिर्ने अनुमति नदिनुहोस् ।
तपाईले आफ्नो फेसबुक खातामा छिर्न अनुमति दिएका एपहरूको सूचि यो सटिङ भित्र एप्स एन्ड वेभसाइट ट्याबमा हुन्छन् । नचाहिने र नचिनेको एपलाई सेलेक्ट गरी रिमुभ गरिदिनुहोस् ताकी अबदेखि उसले त्यस्तो अनुमति नपाओस् । चरणहरू तलका तस्विरमा हेर्नुहोस् ।
तपाईको फेसबुकको पासवर्ड उसँग सुरक्षित हुन सक्छ । पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् ।
२. एप्स एन्ड वेबसाइट्समा जाने
३. शंका लागेको एप हटाउने
४. हटाएको पक्का गर्ने
जानकारी उपयोगी लाग्यो भने सेयर गरेर साथीभाइहरुमाझ पनि बाढ्नुहोस् ।
Previous नेपालका सबै सरकारी कार्यालयमा ट्वीटर सञ्चार अनिवार्य गरिदै
Next साइबर सेक्युरिटी समिट २०१८ सम्पन्न, साइबर सुरक्षाका लागि सामुहिक प्रयासमा जोड